Featuring otutu nkecha imewe.
Streamline airflow maka jụrụ ventilashion
Aerodynamic profaịlụ na ìhè arọ.
Engineering nkasi obi dabara.
Typedị ngwaahịa Igwe okpu igwe
Nọmba nlereanya Helzọ okpu okpu VC301
Njirimara Imewe ikuku, oke fechaa, ikuku ikuku siri ike,
Ịgbatị nhọrọ Nri abalị lightweigh
Styledị na arụmọrụ sitere n'ike mmụọ nsọ, na-enweghị uru ọ bara. Okpu agha nke uzo bu ihe kwesiri ntukwasi obi nye ndi na-acho ya mgbe ha na enwe obi uto di ukwuu dika oso. ụdị ebughibu na-ejikọ oke ikuku na nkasi obi dị mma nke sistemụ dabara adaba yana ịdị arọ dị mfe ma na-adịgide adịgide nke iwu ihe owuwu, ọ gaghị ebu gị ibu. Igwe igwe na-agba ịnyịnya na-ejupụta na som nke njirimara anyị kachasị mma, ọ bụ ezigbo nkwado maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njem ọ bụla. Anyị kachasị atụmatụ nke akụrụngwa ọ bụla na okpu agha ọbụlagodi okpu agha nke onwe ya iji belata ibu ahụ. Nke kpatara ya, anyị kpụkwara nnukwu oghere na ntinye ọwa ime maka ike ikuku dị mma.
Anyị jikọtara okpu agha niile na otu mpempe microshell na-akpụzi, nke na-eme ka ọ dị mfe ma na-adọrọ adọrọ, yana usoro ịkpụzi ngwa ngwa na PC na-enyekwu nchebe n'oge ịnya.
Ihe mkpuchi dị jụụ na-enye nkasi obi dị mma na ngwa ngwa-akọrọ maka ndị na-agba ịnyịnya, ntupu mkpuchi dị jụụ na mpụga nke padding na-eme ka ọ dị jụụ na ịpịgharị okpu agha, ọ bụ ihe jikọrọ ya na polyfoam nke na njupụta kwesịrị ekwesị nke na-enye ihe kachasị mma n'isi onye ọrụ, azụ akụkụ bụ akwa nke naịlọn ahịhịa soro na velcro iji mee ka nkwụsi ike dị ike.
Anyị mere okpu agha anyị na ọkọlọtọ ọkọlọtọ anyị site n'ọtụtụ afọ ịnwale anaylysis na nchịkọta data, anyị nwere obi ike na oke okpu agha ga-adabara ndị ahịa.
Okpu agha a bụ nke EN1078, CPSC na AS / NZS 2063: 2020 na-agbado, na okpu agha a, okpu igwe a na-arụ ọrụ nke ọma maka ule kurb na ule hemi, ihe mkpuchi siri ike nke kachasị nchebe maka ndị na-agba ịnyịnya.
ITW buckle na cam-mkpọchi na-enye nnukwute nkwụnye na ọ dị mfe ịhapụ otu aka, ọ bụrụ na ịchọrọ akara ndị ọzọ, anyị nwere ike ịnye magnet bcukle na Fidlock na Osmar iji mee ka ngwaahịa gị dị iche.
Nke a kwesịrị ekwesị syetem nwere ikike atọ nke vetikal adjustablility, a rubberized pịa rubbergbanwe erughị ala na otu aka na ọ na-mere nke a mgbanwe, inogide ihe iji zere mmebi mgbe a kpọchiri ya. Usoro nke nwere ike iwepu ma dochie anya ya na-enye mgbanwe zuru oke maka mma.
Nke gara aga: Otutu PC Kechie chebe obodo skuuta okpu agha VU103
Osote: MTB Igwe okpu igwe VM203
Kacha mma Road Bike Helmet
Okpu Igwe Egwuregwu Full Face
Street okpu agha